windows 10 တွင် driver သွင်းရန် — MYSTERY ZILLION
windows 10 တွင် driver သွင်းရန်
August 2015 in Help Desk
windows 10 မှာ driver သွင်းချင်လို့ပါ။ ကူညီပါဦးဗျာ
August 2015 Registered Users
Dirver Pack Solution နောက် ဆုံး ထွက် တဲ့ ဗားရှင်းကို ဆိုင်မှာ မေး ဝယ် ပြီးတော့ သွင်းကြည့်ပါ ကျနော်တော့ ဝင်းဒိုး တင် တဲ့အ ခါတိုင်း သုံးတယ်။ ကျနော် ဆီ မှာ နောက်ဆုံး ရှိတာ ၁၄.၇ တဲ့။ ရန်ကုန်ကဆို ပို အဆင်ပြေတယ်။ ၁၅.xx ဆို အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပဲ ။
Windows 10 အခုထိမသုံးဘူးဘူး ၈.၁ နောက် ဆုံးပဲ
Driver snippy ဆိုတာရှိပါတယ် driver pack solution က window 10 မှာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး
ဟုတ်။ အပေါ်က Driver Snipper ဆိုတာက .rar file တွေချည်းသီးသန့်ပါလာလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာဗျ။
August 2015 edited August 2015 Registered Users
rar ဖိုင်တွေကို extract လုပ်လိုက်လေ
အဲတာကို run ရုံပဲ
Driver snip. ကို extractလုပ်မယ်ဆို. No.1Dvd ကိုထည့် ပီးရင် no1 zip fileကို extract to ဆိုပြီးဖြေ ချ မယ့် Folder ကိုရွေးလိုက် သူဘာသူ တခွေပြီးတခွေတောင်းလာပါလိမ့်မယ်